I-China Birchwood FSC yendalo Ukuphinda kuveliswe ukuChwebelana kweNdawo kunye neFektha | Gianty
I-Birchwood FSC yendalo Ukuphinda ibuyeke uComplery
Ukunqunyulwa kwethu kwenziwa kwi-100% FSC®iinkuni eziqinisekisiweyo. Sisebenzisa iinkuni zebirch ezinokuhlaziywa kwakhona kwilize lethu lokusika kuba luhlobo olukhula ngokukhawuleza lweenkuni. I-FSC®yimigangatho yehlabathi jikelele yamahlathi azinzileyo kwaye baqinisekisa ukuba kuwo wonke umthi ogawulweyo, kutyalwe umthi omtsha. I-FSC®Umgangatho ukhathalela ukhula kunye nezilwanyana zeenkuni. Ukuchetywa kwethu kungafakwwanga ukuze ufumane i-100% yemilingo yendalo esebenza ngokupheleleyo.
Isikhuni somthi senziwe kwi-100% ye-FSC® eqinisekisiweyo yokuhlaziya i-birch. Umthi weBirch uyaziwa ngokuba ngumthombo weenkuni okhula ngokukhawuleza kwaye i-FSC® iqinisekisa ukuba iinkuni zivela kumahlathi alawulwa ngokuzinzileyo. Baqinisekisa ukuba kuwo wonke umthi ogawulweyo, kutyalwa umthi omtsha. I-FSC® iqinisekisa ukuba izilwanyana kunye nezilwanyana ziyakhathalelwa. Ukuchetywa kwenziwa ngeenkuni ezingadityaniswanga ukuze ulindele ukunambitheka okuncinci kwendalo xa uzisebenzisa. Ilungele iipikniki zasehlotyeni, ii-BBQ's kunye nokuhamba.
Ukuchetywa ngeplastiki kuza kunye nongcoliseko. Nokuba emva kwamakhulu eminyaka, ezi zinto zinokulahlwa azonakaliswa kwaphela. Ukuphelisa le ngxaki, sinika abathengi i-birch cut cutry iseti eziphefumlelwe yindalo kunye nomthi wayo we-aura .Umthi weBirch ngumthi omdaka-onomthi omdaka kwaye ubalulekile kwimizamo emininzi yokuthengisa. Ngaphandle kwamathandabuzo, xa kusiza ukunqunyulwa komzimba, akukho nto inokubetha izinto zeBirchwood. Ukusikwa kwethu kwenziwa ngexolo kunye nezinto ezikhuphe ngaphandle kokulimaza nawuphi na umthi.
• Ngcono ngokwendalo
• Yenziwe kwi-FSC® iBirchwood eqinisekisiweyo
Izixhobo ezinokuphinda zisebenze
• Umnyhadala okhethiweyo ofanelekileyo, ofanelekileyo, nongenakuthanani noqoqosho ococekileyo wepikinic yakho elandelayo, eofisini okanye kwiqela lesidlo sangokuhlwa, umsitho owodwa, umtshato, okanye ikhefi okanye iresityu
• Ifaneleke kwi-compost yekhaya kunye nakwicompost yorhwebo
I-biodegrade kwaye ingangcolisi okanye yonakalise indalo
Into Ngumthi we-160mm Knife
Isixhobo Iinkuni zeBirch
Yala ixabiso 1%
Ubalo lweCarton Ii-10000 ii-pcs
Izinto ngepakethi nganye Iipesenti ezi-100
Iipakethi kwinqwelo nganye Iipakethi ezili-100
Ubungakanani bebhokisi I-45 * 34 * 39cm
Into Ifolokhwe eyenziwe ngomthi eyi-160mm
Ubungakanani bebhokisi 58 * 40 * 33cm
Into Isipuni somthi we-160mm
Ubungakanani bebhokisi 60 * 42.5 * 33cm
Edlulileyo: I-100% ye-bamboo yendalo eVuswayo kwakhona enokuCutheka
Okulandelayo: I-CPLA esekwe kwiPlatinic engasetyenziswanga yiplanethi engenasiphulelo i-intshi ezi-7
I-100% ye-bamboo yendalo eVuswayo kwakhona enokuCutheka